Izitsha ezi-4 zokunikeza itafula lakho ukuthinta umbala | Bezzia
Ngesikhathi sasehlobo sonke sinesibindi ngombala emakhaya ethu. Siphendukela ku izesekeli ezinemibala egqamile ukwakha izindawo ezijabulisa kakhulu ezifana nendlela esizizwa ngayo ngalesi sikhathi sonyaka. Futhi etafuleni, lapho izitsha ezimibalabala zithatha isigaba sokuqala.
EBezzia sabelana namuhla ngetafula ezine ongasisebenzisa nikeza itafula lakho ukuthinta umbala. Futhi cha, awudingi ukuthenga i-tableware ephelele ukukwenza, kuzokwanela ukufaka izingcezu ezimbalwa ukuze itafula lakho lamukele imodi yasehlobo.
Siyazi ukuthi i-tableware ephelele imele utshalomali olukhulu. Ngaphezu kwalokho, akuzona zonke izindlu ezinendawo yokubeka izitsha ezimbili eziphelele. Ngakho-ke, sikukhuthaza ukuba thenga izingcezu ngazinye, izingcezu ozithandayo, eziheha ukunakwa kwakho nokuthi ungahlangana ne-tableware yakho yansuku zonke.
1 Itafula lezingilazi laseZara Home
2 I-Valence tableware
3 Izitsha zethebula le-Odalin
4 I-Baita tableware nezingilazi zeJometri
Itafula lezingilazi laseZara Home
I-tableware yengilazi enemibala ephuzi, okuluhlaza okotshani nokukhanyayo okuvela eqoqweni elisha leZara Home ayibonakali. Futhi uma izingcezu zazo ezihlukile zidonsa iso, linda uze uzibone ndawonye! Lapho izingcezu ezinemibala ehlukene zihlanganiswa etafuleni, njengakwikhathalogi yazo, itafula liyaguqulwa.
Kuyindlela esingathandana nayo kepha enokuhle kepha: i-tableware ayifanele i-microwave noma i-daishisher. Ngalesi sizathu, asicabangi ukuthi iyithebula lokunethezeka losuku nosuku, kepha amapuleti alo osiwidi noma izingilazi kungaba yindlela enhle yokuqeda ukudla noma ukujabulela isidlo.
Uma uyithandile imibala yetafula le-Zara Home, ngeke ukwazi ukumelana nokubomvu, imifino nophuzi oluqinile lwethebula le-Valance. Iyathengiswa eMaisons du Monde lokhu okwakhiwe ngamatshe nobumba lwamathebula, ngokungafani nalokhu okwedlule, kuyinto microwave kanye Umshini wokuwasha izitsha kuyahambisana.
I-Dinnerware iqukethe amapuleti edina, amapuleti esobho, amapuleti e-dessert, izinkomishi, izitsha, namathileyi okudla okulula. Izingxenye eziningi zithengiswa ngamabili, ngakho-ke ngeke ube nankinga yokwakha ukwakheka kokuthanda kwakho ngaphandle kokutshalwa kwemali okukhulu.
Izitsha zethebula le-Odalin
I-Odalin yi-Kave Home iyona yokuqala kunazo zonke ukuthi sikukhombise i-tableware engakanani namhlanje. Yenziwe ngobumba, ngayinye yezingcezu ezakha le-tableware inomklamo omhlophe wemibala emibili nayo imiphetho ehlukile ephuzi noma eluhlaza okwesibhakabhaka. Yebo, ungayikhetha futhi ngamathoni aluhlaza okwesibhakabhaka.
Njengoba senziwe ngobumba, amaminerali emvelo, ucezu ngalunye lunemibala yalo nokwakheka. Konke kunjalo Umshini wokuwasha izitsha uphephile, microwave kanye kuhhavini futhi ungazisebenzisela ukugqokisa itafula lakho ngaphakathi nangaphandle, ku-terrace noma engadini yakho.
I-Odalin iqoqo elilungiselelwe ukudla kwazo zonke izinhlobo. Kuhlanganiswe amapuleti ayizicaba, amapuleti e-dessert, izitsha ezinobukhulu obuhlukahlukene ngisho nesethi yekhofi, izingcezu zayo ongazithenga ngokwahlukana, ungagcwalisa itafula lakho ngesitayela kusuka ku-appetizer kuya ku-dessert.
I-Baita tableware nezingilazi zeJometri
I-Baita tableware enezicucu eziyi-18 evela eVilla D'Este Home Tivoli ingenye yezintandokazi zethu ngenxa yemibala yayo emihle nemisha. Yenziwe ngamatshe amatshe futhi ipendwe ngesandla Siqukethe amapuleti edina ayisi-6, amapuleti wesobho ayi-6 kanye namapuleti ayi-dessert ayi-6 ngemibala ehlukene eyisithupha ngokulandelana. Ukuphambuka kokuma nombala nakho kugcizelela ubuhle bezingcezu zayo zonke, awuvumi yini?
Yize sikuthanda kakhulu, izitsha zinama-buts amabili. Okokuqala ukuthi awukwazi ukuthenga izingcezu zabo ngokwehlukana; izitsha zithengiswa ziphelele eWestwing. Okwesibili yilokho hhayi umshini wokuwasha izitsha uphephile, okungenzeka kungasebenziseki ukusetshenziswa kwansuku zonke.
Ukunxephezela, noma kunjalo, nakuWestwing ungakuthola izingilazi nezimbiza ezihambisana nale tableware ezithombeni. Kokubili izibuko nezibuko ezinephethini ebunjiwe ngemibala ehlukene nemiklamo zilungele ukwengeza umbala etafuleni lakho futhi umshini wokuwasha izitsha uphephile!
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ikhaya » Ukupheka » 4 tableware ukunikeza itafula lakho ukuthinta umbala